Author Topic: Waxyaalaha kuu sahli kara diyaarinta khudbad wanaagsan (Read 10011 times)
« on: December 13, 2008, 03:42:16 PM »
Kolkii lacagaha aduunka la is garabdhigayo, waxaan in badan maqalnaa arimo ay ka mid yihiin: Lacagtii Yenka ee jaban intaas ayey dollarka hoos uga dhacday, ama lacagtii euro-da intaas ayey tan ingiriiska ka hor martay, IWM. Balse weli ma isweydiisey siyaabaha ay u shaqeeyaan suuqyada lacagaha lagu kala bedesho.
Wax xiriir ah miyaase ka dhexeeya suuqan iyo kan badeecadaha caadiga ah lagu kala iibsado? Inta aynaan ka hadlin suuqa lacagta iyo sida uu u shaqeeyo, waxaan wax yar ka taataaban doonaa siyaabaha ay u shaqeeyaan suuqyada badeecadaha caadiga ah. Taasi waxaa ay inoo sahli doontaa inaan si wacan u fahamno dhaqdhaqaaqa ay sameeyaan suuqyada lacaguhu.
Suuqa badeecadaha waxaa loola jeedaa dhamaan suuqyada lagu kala iibsado alaabaha kala duwan. Alaabahaas waxaa ka mid ah baabuurta, computerada, raashinka, alaabta dhismaha iyo kuwo kale oo badan. Qiimaha lagu kala iibsado alaabahaas kala duwan, waxaa ay ku xiran tahay laba arimood oo aad muhiim u ah.
a) Cadadka alaabada suuqa la keenay inta ay le'egtahay.
b) Dadka diyaarka u ah iney alaabadaas iibsadaan inta ay le'egyihiin.
Si aan arintan si wanaagsan ugu fahamno, waxaan tusaale u qaadaneynaa suuqa computerada dadku isticmaalaan.( PC market). Haddii computeradaas suuqa ooda looga soo qaado( laga soo buuxiyo), balse dadka diyaarka u ah iney iibsadaan ay aad u yar yihiin. Kolkaas waxaa dhacaya in la waayo dad iibsada computeradii, taasina ay dhaliso in qiimihii computeradaas ay hoos u dhacaan. Arintan waxaa jira shuruud muhiim ah oo ay ku xiran tahay, taasoo ah in suuqu yahay mid xor ah.
Suuq xor ah waxaa loola jeedaa in aan dowladu shaqo ku lahayn dhaqdhaqaaqa suuqa. Balse sheyga keliya ee suuqa saameyn ku yeelan karaa uu yahay alaabada la keeno iyo baahida loo qabaa inta ay leègtahay.( Supply and demand mechanism).
Haddii xaaladdu ay dhinaca kale tahay oo ay computeradu yar yihiin, baahiduna badan tahay, waxaa dhacaya in qiimihii computerada ay kor u kacaan.
Haddii computerada suuqa la keenay iyo dadka baahida u qabaa ay is leèg yhiina waxaa dhaceysa in aan qiimihii computerada wax isbedel ah oo weyni aanu ku dhicin. Mar haddaad fahamtey sida uu u shaqeeyo suuqan badeecaduhu waxaa aad u sahlanaan doonta inaad fahamto sida uu u shaqeeyo suuqa lacagaha. Farqiga kaliya ee u dhexeeyaa waxaa weeyaan iyadoo suuqaan lagu kala iibsanayo lacag halkii kii hore la kala gadanaayey computer.
Views: 17787 December 05, 2015, 01:19:38 PM
Views: 10910 December 25, 2007, 04:03:47 PM
Su'aal: HADII AY YARATO RIYADADA (JUNUUBID) ADOON SAMAYN WAX GALMA AH MUDO MAXAA KEENI KARA?
Started by DiiniBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 16272 May 29, 2011, 09:27:31 PM
Su: maxaa keeni kara garabka qaybtiisa kore oo mararka aan socdo xanuunta?
Views: 5475 February 14, 2011, 08:47:33 PM